बंगलादेशको सशस्त्र बलमा चिनियाँ हतियारको गुणस्तरमाथि प्रश्न ! - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Homeअन्तराष्ट्रियबंगलादेशको सशस्त्र बलमा चिनियाँ हतियारको गुणस्तरमाथि प्रश्न !
बंगलादेशको सशस्त्र बलमा चिनियाँ हतियारको गुणस्तरमाथि प्रश्न !
काठमाडौं । बंगलादेशको सशस्त्र बलमा चिनियाँ हतियारको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको एक प्रतिवेदनले विगत एक दशकमा चीनबाट खरिद गरिएका युद्धपोत र विमानमा धेरै प्राविधिक त्रुटिहरू भेटिएको दाबी गरेको छ । बंगलादेश सेनाका प्राविधिकहरूले समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यद्यपी यस विषयमा आधिकारिक रुपमा भने घोषणा गरिएको छैन ।
बंगलादेशमा नौसेना र वायुसेनाको आधुनिकीकरणको काम झण्डै एक दशकअघि सुरु भएको थियो। त्यस प्रक्रियाको एक भागको रूपमा, 2014 मा, बंगलादेश नौसेनाले चीनबाट दुईवटा प्रयोग गरिएको टाइप 053 H2 (Jinghei2Class) फ्रिगेटहरू खरिद गर्यो। पछि थप दुई प्रकारको ०५३एच३ (जिआङ्हु ३ क्लास) फ्रिगेटहरू खरिद गरियो।
त्यसयता चीनबाट दुईवटा टाइप ०५७ कर्भेट खरिद गरी निर्माण कार्य भइरहेको छ । प्रतिवेदनले दाबी गरेको छ कि दुई ०५३ एच३ (जिआङ्हु ३ क्लास) फ्रिगेटमा त्रुटि नियन्त्रण प्रणाली छ। दुई युद्धपोतबाट हेलिकप्टरमा इन्धन भर्न पनि समस्या छ ।
बंगलादेश जहाज दोष, अप्रचलित युद्ध विमान पार्ट्स र चिनियाँ हतियारको गुणस्तर बारे चिन्तित छ।
Previous articleचीन सङ सिमानाका असुरक्षित , प्रहरी नै सिमानाका छोडेर झरे
Next articleआम जनताको जिवन रक्षाको लागि सरकार गम्भिर छ : गृहमन्त्री खाँड